Zvinyorwa Archives - Yazvino Chikoro Nhau: Yazvino Chikoro Nhau
Brazil Visa Lottery Yekushandisa Fomu 2020/2021 uye Maitiro Ekunyorera
Akaiswa mukati Articles, Visa Fomu by Edhiyo Vashandi musi waAugust 5, 2021	• 2 Comments
Kunyorera fomu rekunyorera reBrazil Visa lotari kunotora maitiro akafanana nekunyorera kune dzimwe nyika. Nekudaro, kutarisisa kwakakosha kunofanirwa kupihwa kune chokwadi chekuti panogona kunge paine mamwe magwaro akakumbirwa kuti iwe usazive chinhu uye izvo zvinogona kunge zvichikonzerwa neiyo yekufambisa system gore rega. Ona zvimwe zvakawanda pazasi. Bhuraziri […]
Nyamavhuvhu 2021 Anofungisisa Ndine urombo Quotes kuti utaure kuti Ruregerero Iwe Unonzwa Sei
Akaiswa mukati Articles, dzokorora by TMLT Edhisheni musi waAugust 4, 2021
Kurwira mazwi akakodzera ekugadzirisa fenzi? Ndine urombo makotesheni ndiwo mavambo ako akakwana. Kubvuma zvaunokanganisa idanho rekutanga rakakosha mukugadzirisa zvinhu zvakare. Aya mazwi "Ndine urombo" achakubatsira kukumbira ruregerero nenzira inoratidza manzwiro aunoita zvechokwadi. Tsamba yepachokwadi yekukumbira ruregerero pamwe ne diki […]
Mutengo weZororo muKosovo 2021 Mutauro, Visa Fee uye Nzvimbo dzeVashanyi
Akaiswa mukati Articles, famba by TMLT Edhisheni musi waAugust 4, 2021
Tourism muKosovo inoramba iri indasitiri diki, uye vashanyi vanozoona mavanga ehondo munguva pfupi yapfuura sa1999 apo Serbia yakadzora kuzvitonga kwenharaunda. Muchikamu chino, isu tichakuzivisa iwe mutengo wezororo muKosovo; kubva paVisa Fees, kuenda kumitero yekubhururuka uye matikiti matikiti. Kosovo, zviri pamutemo Republic yeKosovo, iri […]
10 Zvikonzero Nei Vazhinji veNigeri Vanosarudza London kuParis 2021 Kwidziridzo
Akaiswa mukati Articles, famba by TMLTStaff musi waAugust 4, 2021
La Ville Lumière, kana iro 'Guta reChiedza' iguta rinotyisa iro chero mushanyi angade kushanyira asi nei vazhinji veNigeri vachisarudza London kuenda kuParis? Zvisinei, izvi hazvirevi kuti vanhu havashanyire Paris; zviuru zvevashanyi zvichiri kushanyira iro rakanaka guta. Vane guta guru reFrance iro rinorova fungidziro yevanhu vane […]
44 Nyika dziri Zvachose Visa-Mahara kune vese maNigeriya 2021 Kwidziridzo
Akaiswa mukati Articles by TMLT Edhisheni musi waAugust 4, 2021
SeNigerian, kana wanga uchishamisika kana paine nyika dzaunogona kufamba uchienda usina vhiza, usashamise futi. Ehe, pane makumi mana nemana (44) nyika dzaunogona kufamba pasi rese pasina Nigerian Visa. Ruzhinji rwenyika idzi dzisina mavhiza dziri mukondinendi ye Africa. Zvisinei, zvimwe zve […]
Nyamavhuvhu 2021 Motivational Quotes yezuva rekuvandudza Yako Pfungwa
Hupenyu rwendo rwakanaka rwunofanirwa kugamuchirwa kuzere zuva rega rega. Aya maQuotes ezuva achakupa kutanga kukuru kune rako zuva uye zvichakubatsira iwe kupusha kuburikidza nematambudziko ezuva. Chokwadi, anongova mazwi. Asi iwo mazwi akanaka. Uye kana uri padhuze ne […]
US Visa Renewal yeNigerians uye Zvizere Zvinodiwa 2021 Kuwedzeredzwa
Akaiswa mukati Articles, Kuwedzeredza Kuenda, Mufambiro Wekufamba by TMLTStaff musi waAugust 4, 2021
Maitiro eUS visa kunyorera akafanana kana iwe uri kunyorera kekutanga kana kuenda kuUS Visa Renewal yeNigerians. Unogona kuenda kuUnited States nepasipoti yako yekare inosanganisira vhiza inoshanda uye pasipoti yako nyowani. Chikamu ichi chiri chese pamusoro pedu Visa vhiza […]
Yakazara Rondedzero yeVisa Mahara Nyika kune chero eNigerian 2021 Kwidziridzo
Akaiswa mukati Articles, famba, Mufambiro Wekufamba by TMLTStaff musi waAugust 4, 2021
Kufamba veNigeri kunonyatsoda kuronga kwakakomba. Nemapasipoti eNigeria anoratidza makumi masere nemasere murusununguko rwekufamba nenyika, kuwana vhiza kunowanzo kunetsa. Apa ndipo panopinda nyika maVisa emahara emaNigeria kuzotamba. Ramba uchiverenga kuti uwane nyika idzi dzakaita sematsvene matsvene. Zvisinei, kune nyika dzisina mavhiza […]
10 Matipi Ekusarudza Rudyi Kudzidza Kune Dzimwe Nyika Backpack yeVadzidzi
Akaiswa mukati Articles, Study kunze Kwenyika, Mufambiro Wekufamba by TMLTStaff musi waAugust 4, 2021
Kana iwe uchizove uri kunze kwenyika kwemesester kana gore, rongedza sutukesi kuti ubve mumba mako mutsva uye bhegi rekushandisa pakufamba kwevhiki. Muchikamu chino, takaisa pamwechete runyorwa rwezvinhu zvaunofanira kufunga paunenge uchisarudza chaicho kudzidza kunze kwenyika bhegi usati waenda kuchirongwa chako Kudzidza […]
Shanduko pamwero wekutsinhana pa Dollar kusvika Gumiguru 2021
Akaiswa mukati Articles, mari nekutengeserana by TMLT Edhisheni musi waAugust 4, 2021
Are you a Nigerian who is interested in the FOREX market? Or, are do you conduct online payment transactions? If yes, then note. It is proper for you to get yourself acquainted with the current exchange rate of Dollar to Naira. Also, you should have a reliable knowledge of the exchange rate of both the black […]
Nyamavhuvhu 2021 Kunze kwekuroora Kuroora Memo kune Vadiwa
Oracle Nigeria Kuchengeta 2021/2022 Kunyorera Portal Kwidziridzo
FUD Yekugamuchira Chinyorwa 2021/2022 Yedzidzo Session | Portal Dzidzo
KENPOLY HND Fomu Yekugamuchira 2021/2022 Session Kunyorera Maitiro
Maurid Polytechnic Post UTME Fomu 2021/2022 Session
Maurid Poly HND & Degree Yekugamuchira Fomu 2021/2022 Yedzidzo Session
OOU Matriculation Mhemberero Zuva 2021/2022 Yedzidzo Session
Nyamavhuvhu 2021 Rakavimbika Rwekuzvarwa Meseji raAmai Kupemberera Amai Vako
Kusiyanisa Pakati Pechikoro chepamusoro diploma uye High Chikoro Chitupa
Ernst & Mudiki (EY) Kutora 2021/2022 Dzazvino Chinyorwa Kugadziridza
Ernst & Mudiki (EY) Job Vacancy Portal 2021 www.ey.com
NGO Jobs muNigeria 2021 Ona Nyowani Nyamavhuvhu Jobho Nzvimbo
NGO Jobs muNigeria 2021/2022 Kwidziridzo: Tarisa Kukodzera Zvinodiwa
General Electric Nigeria Vakapedza Kudzidza Mukati 2017 | GE Yekushandisa Gwaro uye Zvinodiwa
PhD Mabasa muNigeria 2021 Tarisa Wepamusoro 10 Jobho Nzvimbo dzePhD Holders
www.npower.gov.ng Official Login Portal 2021 Kunyoresa Portal